Nzọụkwụ mbụ bụ akara, nzọụkwụ nke abụọ bụ mwepu: bọtịnụ ịgba ọgwụ mgbochi: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 November 2019	• 23 Comments
isi mmalite: dewestvlaamse.be
Ndị na-ahụ maka ahụike na Netherlands nwere oria ahụ ọkụ kwesịrị iyi bọtịnụ na-akọ na ha. Nke ahụ bụ ihe onyeisi oche Ted van Essen nke Dutch Influenza Foundation (NIS) kwenyere. Ọ ga-abụ ihe mmesi obi ike nye ndị ọrịa, ọ na-ekwu. " Akụkọ RTL na-akọ taa. N’okpuru ọchịchị dị a ka anyị hụrụ ụdị nke a nwere bọtịnụ mbụ? Ichetara? Ndị ahụ bụ kpakpando na kpakpando ndị ahụ jidere n'aka na onye ọ bụla maara onye ga-anọ ebe ahụ ka ọ ghara ịdaba na mbuso agha ahụ. Ugbu a emebiela akụkụ ahụ nke akụkọ ihe mere eme ma anyị maara ugbu a na ndị otu ahụ ka nọ na-akwado ego onye isi ọchịchị ahụ. Ọ bụ abụghị ihe efu na ọtụtụ ndị ndu Nazi nwere ike ịnweta njem KLM n'efu nke Prince Bernhard mere ka Argentina gaa na ọ bụghị ihe kpatara ya na a họpụtara ọkachamara rọketị Werner von Braun dịka onye ntụzi NASA.
Edebeghị aha ndị njem n’oge ahụ, nke ahụ abụghịkwa ihe ijuanya, agafeela, ihe akaebe abụghịzị ma ọ bụ opekata mpe iweta, mana n’ebe ndebe ihe ndebiri na Argentina, o doro anya na-egosi na enwere ndepụta ndị njem ebe ahụ. ebe enwere ike iguta ya na ndi KLM ndi isi ochichi site n'aka KLM bu Zurich bufee Buenos Aires. Aha dị ka Bernard Helfrich, onye na-ese ụkpụrụ ụlọ n'oge ndị Nazi, onye na-arụ ọrụ maka Peron ma anabataghị ya ebe ahụ. Helfrich na-aga na 25 July 1947 na ụgbọ elu KLM sitere na Zurich (nke nwere aha Prince Bernard n'ụzọ dị egwu) gaa Uruguay na site na ụgbọ mmiri gaa Argentina. Juan Peron abụwo onye isi ala nke Argentina kemgbe 1946. Ọ dịtụghị mgbe o zoro ọmịiko ya maka Hitler na Nazi Germany. Na Argentina ọ mere ọbụna na ndị agha Argentine na uwe ndị German na-aga n'okporo ụzọ, mgbe agha ahụ gasịrị, ndị omempụ ndị Nazi nabatara nnabata karịa na Argentina. Ha nwere ike iji ha rụọ ọrụ nke ọma na ihe ọmụma ọzụzọ ha nke oge, n'ezie na mba ebe mmepe akụ na ụba malitere, na ego ha karịrị nnabata.
Ndị Netherlands ji ezi azụmahịa na Argentina na, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ụgbọ oloko. Prince Bernhard bu onye enyi Peron. Ọ bụ n’enweghị ihe kpatara ya na Prince Bernhard bụ onye guzobere otu Bilderberg na ọ bụghị n’enweghị ihe kpatara na otu ahụ bịara doo anya otu ebumnuche nke Adolf Hitler, nke bụ nnukwu alaeze Europe. Aha dị ka Klaus Barbie, Adolf Eichman, Jozef Mengele, mana ọ dịkwa obere chi dị ka Horst Deckert, Rüdiger Schultz bụ ndị a nabatara na Argentina; Bernhard enyi obodo. Nke abụọ a na-egosipụtakwa na ndepụta ndị njem nke KLM dị na Argentina. Gọọmentị America nke oge ahụ gaara arịọ KLM ka o nyochaa ndị njem ha nke ọma, n'ihi na ha nwere ihe ngosi siri ike na ndị gbara ọsọ ndụ nke ndị Nazi na-eso ndị KLM na-eme njem nchebe karịa site na otu njem Switzerland nke otu ọfịsa onye uwe ojii SS nọ. Ka anyị tụlezie na ọmarịcha sham ikpuchi eziokwu ahụ bụ na ndị Nazi niile anaghị anabata ịnabata ndị ọbịa. Uzo na ọdịda nke Adolf Hitler jere ozi ma mee atụmatụ nke ọma tupu oge eruo. Ebumnuche ya bụ itinye aka na ogige ụgwọ, n'ihi nke kpagburu ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ ọnụ ọgụgụ nke ọnụ ọgụgụ nde 6, natara ọkwa nnabata na steeti ya (yana ijeri nkwado).
Makesnye na-etinye obere mgbalị Na - abụghị usoro nke akụkọ ihe mere eme igwu, nwere ike ịchọpụta na ma eleghị anya naanị eziokwu nke anyị nụtụrụla n'ọnụ Winston Churchill bụ nkwupụta a: Ọ bụ onye meriri dere akụkọ ahụ. Na Netherlands nke ahụ pụtara nke ukwuu na anyị chere na ọ dị mma na onye isi anyị rụrụ ọrụ otu oge maka IG Farben (ụlọ ọrụ nke gas ahụ a ma ama) na ewepụtara onye na-ekwu okwu ekele n'agbamakwụkwọ nke Juliana na Bernhard.
Oflọ nke Lippe, nke onye isi Dutch Bernhard nwekwara ike ịgụta ya (n'ezie dịka ọnụọgụ, mana ekele maka ihu ọma nke nwanne nna ya, Fürst Leopold van Lippe, sitere na 1916 dị ka onye isi) sonyere ndị Nazi. N'ọrụ ya Royals na Reich, ndị isi Hessen na Nazi Germany (2006) Jonathan Petropulous na-egwu ala na-erughị ndị Nazi iri abụọ n'okpuru Lippes (ma chefue ịgbakwunye onyeisi anyị Bernhard na ya maka ịdị mma). Site na nke a, a ga-akpọ okike, nke kewara n'usoro dị iche iche, n'enweghị nsogbu ọ bụla bụ onye na-eweta National Socialism. N'ụzọ dị ịtụnanya na mbido, na 1928, na-esonye na NSDAP na SA nke nwa nwanne nne Erhardst Li Lipe, onye a kara aka ịrịgoro n'ocheeze Lippe. Ya mere, ọ bụ onye ozi izizi mbụ Erbprinz na ọkwa ndị Nazi.
Ihe a dị n’elu dị mkpa na ọnọdụ nke isiokwu a, agbanyeghị eziokwu na ị nwere ike ịchọta ya iwebata akụkọ ihe mere eme na-atụghị anya ya. M na-agbalị ime ka o doo onye na-agụ ya anya na ụwa na-achịkwa site n’otu òtù na - agba agba agba ọchịchị mgbazigharị na - eme mgbe ụfọdụ na - eke ndị iro nke onwe ha dịka ndị ọbịa iji mechaa nwee ike itinye aka siri ike ma mezuo ebumnuche dị elu. akwụkwọ ọhụrụ m). N'ọnọdụ a, ọ dị mkpa ịhụ na Agha Worldwa Mbụ ejiri mee ihe iji mebie Alaeze Ottoman na idobere ala ahụ na Palestine maka steeti Israel. Emebere nke a na nkwupụta Balfour na nkwekọrịta Sykes-Picot (lee lee nkọwa a). Agha Secondwa nke Abụọ nyere aka igbochi mbido steeti Israel ngwa ngwa, n'ihi na ụwa niile nwere obi mgbaghara ugbu a maka otu ndị ahụ kpagburu. Na 1948, ihe okike nke steeti Israel bu ihe n’ezie. Kemgbe ahụ, ike na mmetụta nke Israel abawanyela nke ukwuu na anyị nwere ike ịhụ n'eziokwu na US bụ nnukwu ego Israel na onye na-akwado ya na-efu ndị Palestine. Could nwere ike ịsị na enyere otu aka ahụ Adolf Hitler nyere ya aka n'ihe dịka ihe nke dọpụrụ ya n'ọbụbụ ọchịchị ya iji dochie fasizim na ngosipụta nke ọchịchị onye kwuo uche ya.
Ya mere o ghaghi iju gi anya na, dika otutu ndi okacha akuko si kwuo, Adolf Hitler tinyere ndu ya na Argentina rue onwu ya
Na 1954 nguzobe nke nzuzo Bilderberg otu site na Socialist (na freemason) Joseph Retinger na Prince Bernhard mere. Otu ndị isi nọ n'ime ya bụ Robert Ellsworth (Lazard Freres = Rothschild), John Loudon (NM Rothschild) Paul Nitze (Schroeder Bank), CL Sulzberger (New York Times), Stansfield Turner (ọ mechara bụrụ onye ntụzi CIA), Peter Calvocoressi, Daniel Ellsberg, Andrew Schoenberg (RIIA) na Henry Kissinger.
Ọgbakọ nzuzo nke Bilderbergers mbụ mere site na 29 ruo 31 na Mee 1954 na họtel Bilderberg na Oosterbeek, nke otu a nwetara aha ya. Nzube nke European Community, ya na European Union nke na - esite na bọọdụ ịbịaru bọọdụ a na - abịa. Ya mere enwere ike ịkpọ ya ihe ịtụnanya na onye isi ala mbụ nke European Europe bụ onye ndu ndị Nazi mgbe ochie. Walter Hallstein bụ onye otu ndị Nazi “na-echebe iwu” nke nzukọ a, bụ nzukọ nke ghọrọ ogidi iwu maka otu Europe n'okpuru nlekọta nke njikọ ndị Nazi / Cartel. Hallstein bụ prọfesọ nke iwu na akụnụba na Mahadum Frankfurt, ebe isi ụlọ ọrụ kemịkal kemịkal na isi ego ndị Nazi, IG Farben nọ. Ọ bụ onye isi oche nke European Commission site na 1958 ruo 1967.
Ọ bara uru ịhụ ka hares si agba ọsọ nakwa na anyị ka na-arụ otu mpaghara ike, mana na jaket dị iche. Ndị ahụ nyere Hitler ego na ihe siri ike ahụ bụ ndị ka nọ n'ike. Ejiri jaket na -ekwu okwu George Orwellian dochie jaket nke fascism, nke eji eji ịhụnanya kpuchie ihe ọ bụla nke fascist. A na-akpọ ogige ịta ahụhụ GGZ ụlọ ọrụ ahụike; a na-akpọ ogige agụmakwụkwọ; A na-akwadebe mwakpo nke taa site n'ịzụ ndị ọrụ mmụọ ọgụgụ isi na ịkwadebe iwu nke na-ewepụ ụzọ ọ bụla iji mee ka ndị mmadụ pụọ n'ụlọ ha. Ọ bụ ezie na ọchịchị Hitler na-arụ ọrụ n'ụzọ nke ndị fascist, ọ bụ ugbu a ọ dị mma nke ọma ma jiri ngwa ọrụ na agịga GGZ dochie uwe ndị agha na egbe. Akara doro anya nke ọchịchị Nazi site na Star nke David mechara nwee mmegide (ma eleghị anya na nzuzo) mmetụta nke:Ihe ọ bụla na-eme gị onye ọ bụla, ị na-enye ọkwa nnabata". Chee echiche nke ọma banyere nkwupụta ahụ.
N’ebe Adolf Hitler nwere ngalaba mgbasa echiche a na-ahụ anya nke ọma na ebe ọchịchị a na-alụ agha, okwu ọhụrụ Orwellian pụtakwara n’ebe ahụ. Ndị agha anyị adịghị aga agha; Ndi agha anyi n’enye ndi udo. N'ezie na mpaghara niile nke ọha mmadụ anyị na-ahụ fasizim nzuzo na jaket na-atọ ụtọ na-eme ka ọ dị mma. Akwụkwọ a na-akpọ ndị Nazi ọkụ ka ghe oghe; akwụkwọ a na - ere ọkụ taa na - ewere ọnọdụ site n'aka Minista Kasja Ollongren site na nke ọma ma na - agbagharị na igbe nke echiche ọ bụla na - agbagha. Ihe a na-akpọ n'ihu ọha na-agbasa echiche n'okpuru Nazi Germany ka a na-akpọ ugbu a akwụkwọ akụkọ. Echiche nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Dutch n'onwe ya na-ewepụta ozi akụkọ adịgboroja dị ukwuu site na ịtọlite ​​saịtị ndị mmegide site na steeti ahụ, ka i wee nwee ike ịkọ mkpịsị aka na otu ahụ mepụtara ma setịpụrụ mmachi, ka ị wee kpochapụ ezigbo nkatọ na nnwere onwe. . Ọ gafewo ma gbagochaa karịa ka ọ dị n'oge ahụ, mana o doro anya na ngọngọ nke nyeere Hitler aka na ịrịgo ya; Ọ makwaara na ọ ga-ada ọzọ mgbe afọ ole na ole gachara, wee gaba n’ihu otu ụkpụrụ ahụ n’ụzọ ka mma. Nke ahụ bụ ihe ziri ezi ka ọ bụ echiche nke imegide mmadụ? Ee e, nke ahụ bụ naanị nghọta dị ọcha ma jikọta ntụpọ na eserese ahụ kama ịga na ọnya blin.
Ọ bụ ezie na n'oge ọchịchị Nazi Germany ka njigharị doro anya nke otu dị iche iche nwere ụdị mmetụta ọjọọ nke nnabata mgbe agha ahụ gasịrị, anyị na-ahụ ugbu a na-emetụta njehie nke akara ahụ. A na-atụgharịgharị ihe niile, dịka 'ụkpụrụ rejuvenation George' nyere ya. Ndụmọdụ Ted van Essen nke Dutch Influenza Foundation, ebe ndị na-elekọta ya kwesịrị iyi bọtịnụ, na-echetara anyị ọchịchị nke '40 /' 45. N’ebe ahụ, a na-eji akara nrịbama ahụ akara otu nke “kwesiri ka emecha ọcha”. Ugbu a ejiri akara ahụ mee ihe iji gosipụta otu ahụ "dị mma ijikwa". Yabụ na anyị na-ahụ ụdị fọdashịlị ebe a, ọzọ na jaket na-atọ ụtọ. Ma ahọrọ ọgwụ mgbochi dị mma nke ukwuu, n'ihi na ọtụtụ ga-aghọta echiche ịgbasa echiche na ịgba ọgwụ mgbochi naanị dị mma yana na onye ọ bụla na-agagharị n'enweghị ịgba ọgwụ mgbochi bụ ọnya na-egbu oge. Anyi na-agba akaebe nye echiche ndị fasizim kechiri agbasa echiche na-agbasa echiche, na-eji usoro mgbasa ozi na-eme ka ndị mmadụ zoo site na nzọụkwụ n'ọnọdụ nnabata. Ndị ọrụ mgbasa ozi na-arụkwa ọrụ dị mkpa na nke a. N’imem akwụkwọ ọhụrụ Akọwara m ihe kpatara na anyị enweghị ike ịtụkwasị obi na mkparịta ụka mgbasa ozi mmadụ.
Otutu echiche nke bọtịnụ ịgba ọgwụ mgbochi ga-ele anya dị ka ihe mkparị, n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ mmadụ niile ejirila echiche ahụ na ịga ije na-enweghị ọgwụ mgbochi dị oke egwu. O doro anya na a na-achakwa onyoyo nke ihe a n’akpukpo site na mkparịta ụka na redio na TV. Ndị ọbịa na tebụl Jeroen Pauw na Matthijs van Nieuwkerk ma ọ bụ ndị ọkachamara na Nieuwsuur kpebisiri ike ile ụwa anya. Nkatọ ahụ sitere n'akụkụ a na-achịkwa, nke pụtara na a na-enwe bọmbụ na ala ala abụọ ma ọ bụ na 'ikike' ma ọ bụ 'izu izu' na-adịgide. Nnukwu akara malitere amalite (hụkwa) ụdị mpempe akwụkwọ a) ma ugbu a bụ ndị akpọrepu na obere na ntụnye nke bọtịnụ a. Dịka m siri kwuo, anyị na-ahụ jaket ochie na jaket ọhụrụ. N'adịghị ka ihe mere n'okpuru Nazi Germany, a na-achịkọta ihe niile ugbu a na uwe na-elekọta Orwellian dị ezigbo ụtọ ma dị mkpa en a na-eme ya nwayọ nwayọ.
Echiche nke itinye bọtịnụ dị ala fascist dị njọ. Ọ na --eme ka ndị mmadụ nwere echiche banyere ịgba ọgwụ mgbochi nwere ike jụ ndị ọbịa n'akụkụ ihe ndina ya, ya mere ha agaghịzi enwe ike ịrụ ọrụ ha. Nke ahụ bụ ụzọ dị mfe iji mee ka echiche dị ike. Formanye aru nke uche bu nkowa nke fascism.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: relay-of-life.org, buw.nl
Ndi nchịkwa Netherlands nwere obe na ihe nnọchite Nazi?
Tags: Afghanistan, button, German, Essen, fasizim, agba, ịgba ọgwụ mgbochi, Ọrịa, Kasja, Nazi, Nazis, Nederlandse, Obodo, ntọala, Ted, ọgwụ ịgba ọgwụ, van
10 November 2019 na 15: 13
Mpempe akwụkwọ ọhụrụ ndị a na-enye nnwere onwe, mana ọ bụ na ha anaghị abụ ihe mgbagwoju anya n'otu oge? Anyị na-arịọ nke a n'aka onye ọrụ COC Margriet Oosterhuis. Ọ ghaghi ịchị ọchị. "Ee," ọ na-akwado, "ọ bụ ihe mgbagwoju anya, n'ihi na n'otu aka anyị chọrọ iwepu igbe na n'aka nke ọzọ, enwere aha mmado karịa ka ọ bụla."
Rịba ama Martin Vrijland: na ihe aha a ka ewepụrụ heterosexually na ìgwè ndị ọhụrụ a. Okwu a bu "nnwere onwe" bu ihe omuma atu ozo nke George Orwell kwuru. Ọ naghị enye nnwere onwe: o nwere mmetụta na - apụ apụ (nke enweghị).
10 November 2019 na 15: 28
1 nke ihe edere na ederede Trouw bu 'pan'.
Legodị ihe ihe Pan bụ:
Gụọ akwụkwọ m maka nkọwa zuru ezu na ihe kpatara nke a ji dị mkpa iburu n'uche.
10 November 2019 na 15: 32
Cheedị otu obere nzọụkwụ site na bọtịnụ na akara dijitalụ dị (dịka ọmụmaatụ, mgbaaka RFID).
Can nwere ihe ị ga-eche gbasara nke ahụ?
Ọ bụ na nkwadebe ... jikọọ ntụpọ ahụ
11 November 2019 na 23: 56
E nwere otu usoro etiti ọzọ site na “smart smart” na teknụzụ 4G / 5G: jiri afọ ofufo kekọrịta ụlọ ọrụ ahụike gị na ụlọ ọrụ.
N’ezie, ịfefe ọkwa ahụike gị gbasara nlekọta ahụike gị bụ ihe nzuzo dị omimi, mana n’abụghị nke ọma anyị nwere ike ikwere ASR n’elu anya igwe ha na-acha anụnụ anụnụ na ha ga-eji data naanị maka ezigbo mkpali. Ha edobela BV iche maka ebumnuche a ebe a ga-echekwa data ahụ (onye nwere ike ịkọwa ihe kpatara nke ahụ ga-eji nye nkwa ọ bụla?). Ugboro ole ka Facebook na Google na-agbaso na nkwupụta nzuzo nke onwe ha?
Eji obere ajụjụ dị mkpụmkpụ sitere na "mmemme onye ahịa" gbasara mmemme mmeghachi omume ASR VR.
Nke a bụ mmalite, buru ụzọ bu obere ihe ahụ tinye implants na ọgwụ ya na ndị ahịa..Pụ Regina Dugan (DARPA) na ọ ga - ama.
12 November 2019 na 00: 41
Ekwu okwu maka synchronicity ...
10 November 2019 na 15: 36
Na akara ngosi karia (guo na mwepu nke ozo, gua: fascism na jaket di nma)
ntinye maka iwu sitere na ndị otu Raemakers iji mezie Iwu Ahụike Childmụaka iji gbaa ndị nne na nna ume ịhọrọ n'etiti ebe a na-elekọta ụmụaka na-eme ma ọ bụ na-ekweghị ka ụmụaka na-esonye na mmemme ịgba ọgwụ mgbochi mba (35049).
Ihe ozo bu ntinye aka maka iwu nke sitere n’aka ndi Raemakers iji megharia Iwu Nlekọta umuaka iji gbaa ndi nne na nna ume ịhọrọ n’etiti umuaka na -eme ihe ma obu n’ekweghi ka umuaka adighi esonye na mmemme oria ogwu nke mba, akwukwo omeiwu 35049.
10 November 2019 na 23: 12
Mara: "ị nwere ike ịhọrọ" bụ nkwupụta George Orwell maka "ewepụrụ gị"
10 November 2019 na 16: 09
Ihe nzuzo kasịnụ nke agha ụwa nke abụọ
bụ ikekwe na ọtụtụ ndị Nazi dị elu enweghị nzụlite German / German.
N’ezie, nrụgide ndị ọgbọ niile bụ naanị ịta ahụhụ. A machibidoro emegide, mgbanwe nke echiche. A ghaghi inwe nghọtahie. Hey, anyị na-ekwu maka Netherlands ebe a?
10 November 2019 na 17: 56
Okwu akuko Orwelian? n'ihi nke a
Naturenweta okike kwesiri ụwa niile (enweghị afọ ole?), N'ikwu na ekwere maka okike, ha ha ha.
Ihe ọ bụla nna nna ochie metụrụ / hibe, ị mara na ọ bu ya bu ọrịa ma na enwere ndị ọzọ na-anọgide sonyere. N'ezie, bọtịnụ nke WWF kwesịrị ịnwe mbipụta nke Prince in Uniform, mgbe ahụ ị mara ihe ọ bụ n'ezie.
(n'otu oge ahụ gị na ihe omume ntụrụndụ dị ka onye ahụ a kpọtụrụ aha na mbụ si malite na-eme, na-agbapụ rhino si)
10 November 2019 na 21: 20
Ihe anyị na-eme na ikwusa ozi ọma ebe a na saịtị ruo ọtụtụ afọ na-abawanye n'elu ma n'ọhịa a na-ahụ anya nke atụrụ na-afụ ụfụ nke nwere ọnya na. Ugbu a nhọrọ a ga-ebelata ma ọ bụ chụba ya n'ọhịa nwere oke nnwere onwe ngagharị.
Banyere ndị NAZI ha agabeghị, nnukwu nghọtahie dị adị. Ndị nwere anya ịhụ ya ga-elebanye anya na isi ụlọ ọrụ NATO gụnyere akara ngosi Echefula Martin Bormann, ezigbo onyinyo nke Reich onye nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị nsogbu ruo ọtụtụ afọ na Paraguay na gburugburu ya. Oh ee, o kwesịrị iju anya na Bushes na Merkel nwere ala na ụlọ na Paraguay ma bụrụkwa ndị agbata obi ibe ha ..
10 November 2019 na 21: 25
Hitler bụ onye Zaion kacha bụrụ onye…
10 November 2019 na 22: 57
Vidiyo ahụ na-eleghara ụgha kachasị nke oge ahụ anya ma na-eleghara eziokwu ahụ anya site na Zionism sitere na West (UK na US) na ndị a ma ama na-akpata ọbara. N’aka ozo: ha naeleghara ndi Nazi Germany anya dika ndi nwere onwe-onye iro-nke onwe (dika odi na ISIS n’agha na Syria bu onye mere onwe ya.
11 November 2019 na 00: 20
ee ee na eziokwu, enwekwu m nsogbu na nkwekọrịta nke Haavara na judenrat (kansụl ndị Juu). Banyere itinye ego, ana m akwado ọrụ Antony C. Sutton "Wall Street na The Rise of Hitler"
"Hitlerism nyere anyị ohere ịmegharia ihe niile dị na Zaịọn."
11 November 2019 na 00: 42
Ị pụtara nke a:
11 November 2019 na 00: 46
Ya mere n'ezie akụkọ ochie niile
Na-enweghị ihe ọmụma banyere oge gara aga, ọhụụ ọhụụ nke ugbu a
11 November 2019 na 08: 00
Akwụkwọ na-adọrọ mmasị nke Greg Hallet, onye bụbu onye nyocha nzuzo nke MI6, Hitler bụ onye nnọchi anya Britain, ka akwadoro. Site n'ụzọ, Hitler enweghị ike ịrụ ọrụ dị ka onye nledo n'oge 1e na mgbe ọ gachara. Ọ ga-abụrịrị na o nwere ndị na-eme ihe nkiri.
Ndi Britain nwere ihe ozo di iche karie bekee!
Ọ dị mma, Hitler gburu onwe ya. Ekwetala ya. Achọpụtaghị DNA ya na ndabere nke "ozu" ya na Berlin. Anwụrụ ọkụ na enyo niile na-eduhie ọha mmadụ. Hitler, ikekwe nnukwu onye sabo, onye tinyela Germany na ezigbo onye German nnukwu nsogbu. Germany ka bụ obodo jisiri ike nke "ndi Germany."
Enwere ike ịchọta ndebiri nke nchịkwa / iwepu ihe a na Europe niile ebe ndị ọbịa 'J.Randall' na-ekpuchi ndị nkịtị na-enwereghị onwe ha ịzụlite onwe ha na ikpebi ọdịnihu ha.
10 November 2019 na 21: 40
Kedu ihe mere na isi ụlọ ọrụ NATO ahụ? Ihe na Sedes Sacrorum Schutzen Staffel?
10 November 2019 na 21: 47
..dikwa nma mgbe anyi n’enye oru, imechacha ihe ff 😉
Paraguay na ntanetị gbasara Bush sị 100,000 acre hideaway
11 November 2019 na 00: 55
Ee ee .. ha gụrụ ma zaghachi:
11 November 2019 na 11: 32
Echere m na nzọụkwụ nke atọ bụ ịme ma nwalee nchekwa data DNA. Dị ka o kwesịrị onye ọhaneze nwere ọfụma, ihe ọ bụla si na otu pati ahụ dị ọtụtụ. Ekwesịrị ịchọpụta ihe dị iche iche na ihe ndị ọzọ na-adọpụ uche.
11 November 2019 na 11: 49
Na ngosipụta a na March 13 2012 na Berlin Dr. Mee ndị bi na Germany na Europe ka ha buru ibu ọrụ. Ọ bụ oku iji jikọrọ aka wee wulite Europe onye kwuo uche ya na ndị mmadụ - yana sayensị sayensị ọhụrụ na-adabere na ọgwụgwọ na mgbochi ọrịa. Nchoputa ihe omimi sayensi di ugbu a banyere ogwu ndi mmadu n’eme ka o doo anya na ogwu ogwu ndi a nwere ike iji oke ike belata otutu oria oha. Agbanyeghị, enyeghị anyị 'World enweghị ọrịa' - n'ihi na ọrịa ndị a niile bụ ahịa ahịa ijeri dollar dollar maka ụlọ ọrụ Pharma. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ụwa a enweghị ọrịa maka anyị na ụmụ anyị, mgbe ahụ anyị ga-adị n'otu. Ugbu a!
11 November 2019 na 11: 58
Afọ gara aga maka nke mbụ.
Ezigbo nna m ukwu / madam,
M na akwụkwọ ozi a, a na m akpọ gị oku ka ị bịa n’ọnọdụ ụgba ọ bụla nke afọ.
Get ga-enweta flu shot n'efu, ịnwere ike ịbịa ma bulie nsonaazụ ụbọchị na oge a.
Iwe were m na dọkịta m ziteere David Icke akwụkwọ na arịrịọ maka iwepu onwe m na faịlụ ahụ.
Oge izu 3 gara aga.
M na akwụkwọ ozi a, a na m akpọ gị oku ka ị bia n ’afọ flu
Ugbu a, aga m akpọ ya.
" Kedu otu ị ga - esi manye gọọmentị ịgbanwe mgbe ị na - eleghara ọha mmadụ anya?
Onye akaebe na-ahụ maka okpueze na egwuregwu dị n'etiti mpụ steeti na onye nnọchi anya (ọkàiwu Meijering megide Plasman) »
Nleta nile: 14.836.672